Nepali Rajneeti | निर्मला ह’त्या’का नयाँ अ’भि’यु’क्त ?
निर्मला ह’त्या’का नयाँ अ’भि’यु’क्त ?
चैत्र १०, २०७७ मंगलबार ६७९ पटक हेरिएको
भगिरथी ह’त्या’को सफल अनुसन्धान गरेर चर्चा र प्रशंसा कमाएका सुदुरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डिआइजी उत्तमराज सुवेदी यतिबेला निर्मला पन्तको घटनामा केन्द्रीत छन् ।
प्रदेश इन्चार्जको रुपमा कार्यकाल सकिनै लाग्दा उनी यो प्रकरणलाई सुल्झाउने प्रयासमा छन् ।
निर्मला पन्तको ब’ला’त्का’रपछि ह’त्या भएको मंगलबार ठ्यक्कै ३२ महिना बितेको छ ।
घटनाको अनुसन्धानमा एक दर्जन भन्दा धेरै प्रहरी टोली खटिए पनि सुल्झन सकेको छैन ।
अहिले पनि सिआइबीका डिएसपीको नेतृत्वमा एक टोली महेन्द्रनगर बसेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
पछिल्लो अनुसन्धानमा नयाँ तथ्यहरु भेटिएका छन् । स्रोतका अनुसार दिलिपसिंह विष्ट नभई अर्का एक व्यक्तिमाथि प्रहरीले अनुसन्धान केन्द्रीत गरिरहेको छ । ती व्यक्ति विगतमा पनि प’क्रा’उ परेर छुटेका थिए ।
तिनै व्यक्तिमाथि प्रहरीको पछिल्लो अनुसन्धान केन्द्रीत रहेको स्रोत बताउँछ । परिस्थितिजन्य प्रमाणका आधारमा ती व्यक्तिको संलग्नता देखिएको छ ।
तर, प्रहरीलाई समस्या के छ भने यो घटनामा अकाट्य प्रमाण जुटाउन समस्या छ । किनकि, अकाट्य प्रमाण डिएनए टेष्टबाट मात्र सम्भव छ । तर, पर्याप्त नमुना नहुँदा डिएनए टेष्ट सम्भव नभएको रिपोर्ट निष्कर्ष यसअघि विज्ञ समितिले दिइसकेको छ ।
निर्मलाकी आमाले दिलिपसिंह बिष्टवि’रु’द्ध नै जाहेरी दिएकी छिन् । उनले पृष्ठभूमि र प’क्रा’उ परेपछि दिएको बयान र घटनास्थलको अवस्था ठ्क्याक्कै मिल्ने भएकाले धेरै जसो अनुसन्धान अधिकृत उनी नै अभियुक्त भएको दाबी गर्छन् ।
गत महिना प्रहरी प्रधान कार्यालयले सो घटनामा खटिएका अनुसन्धान अधिकृतसँग छलफल समेत गरेको थियो । जसमा धेरैले दिलिप नै हुनसक्ने बताए भने केहीले फरक कुरा राखेका थिए ।
भगिरथीका अभियुक्त प’क्रा’उ परेपछि केही मन्त्रीहरुले नै निर्मला घटनाका अभियुक्त पनि पक्राउ पर्ने बताएका थिए ।
जसकारण पनि प्रहरी दबाबमा छ । पदका लागि पार्टी नै छाडेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई यस्ता विषयमा ठूलो चासो छैन ।
तर, प्रहरी नेतृत्व भने सकेसम्म छिटो यो घटना सुल्झाउन चाहेको छ । तर, स्थानीयबाट पर्याप्त सहयोग नभएको गुनासो डिआइजी सुवेदीले केही दिनअघि सार्वजनिक रुपमै बताएका थिए ।-दृष्टिबाट